Uphononongo oluceliweyo okanye oluhlawulelweyo luphononongo olunobungozi | Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 20, 2016 NgoLwesithathu, Julayi 20, 2016 Douglas Karr
Sibe nengxoxo eqinileyo kumsitho wobunkokheli bengingqi ekuqokeleleni uphononongo kumashishini nakubathengi kwi-intanethi. Uninzi lwengxoxo lwalukujikeleze uphononongo oluhlawulelweyo okanye abathengi abanomvuzo kuphononongo. Andilogqwetha, ke ndiyakucebisa ukuba uthethe nelakho ngaphambi kokuba undiphulaphule. Indlela endime ngayo kule ilula… sukuhlawula okanye uvuye ukuphononongwa. Unokungavumelani nam, kodwa kanye njengokuba icandelo lokukhangela izinto eziphilayo lafunyanwa ngamanani anyusa ngobuxoki, uphononongo lunomcimbi ofanayo. Kwaye iinkampani ezithathe inxaxheba zalahleka kakhulu kunangaphambili.
Umngcipheko woVavanyo oluHlawulwayo kunye noMvuzo
Yinkolelo yam yobuqu ukuba uza kuba nemicimbi emi-4 xa uhlawula okanye uphonononge ukubuyekeza:
Imiba yoMthetho -Usenokuba uyaphula Izikhokelo ze-FTC. Ayisiyiyo loo nto kuphela, umqeshwa, inkampani, okanye umntu omhlawulelayo naye usesichengeni sokophula izikhokelo ze-FTC. Namhlanje, asiboni misebenzi mininzi koku. Nangona kunjalo, kwixa elizayo ndiyakholelwa ukuba kuyakubakho iinkqubo ezilungiselelwe ukufumanisa ubudlelwane obuya kuthi ekugqibeleni bubafumane bonke abachaphazelekayo engxakini. Ngaphandle korhulumente, musa ukumangaliswa ukuba ubekw 'ityala lelinye lamaqonga.
Ukophula umthetho -Ungatyala imali kancinci kuphononongo namhlanje, kodwa xa ubhaqwe waphula imigaqo yewebhusayithi, loo mxholo uya kulahleka ngonaphakade kwaye igama lakho linokonakaliswa ngaphaya kwalo naluphi na utyalomali owakha walwenza. Ukubanjwa ukuhlawulela uphononongo kunye nokuba uhambe esidlangalaleni akufanelekanga nawuphi na umngcipheko. Iimali ezimbalwa ezichithwe namhlanje zinokuhlawula inkampani yakho yonke into kamva.
Ukuthembeka - Ngokuzimisela, iphi ingqibelelo yakho njengeshishini? Ngaba le yindlela onqwenela ukwenza ngayo ishishini? Ukuba awunakuthenjwa ukuba ulawula igama elicocekileyo kwi-Intanethi, uyakholelwa ngokwenene ukuba abathengi kunye namashishini baya kufuna ukwenza ishishini nawe?
uphawu -Zenzele into elungileyo kwaye uye ufunde uphononongo Uluhlu lukaAngie. Esi ayisisi sivakalisi sinye, luvavanyo lomgangatho oluchaza yonke inkqubo abathengi abaninzi abaye bahamba nayo kunye nomboneleli ngenkonzo. Uluhlu luka-Angie kutsha nje luye lwehlisa i-paywall yabo kwaye abathengi ngoku bayasiqonda isizathu sokuba uninzi lwababhalisi kuluhlu luka-Angie bayithande inkonzo. Ukuphononongwa kakhulu kunzima ukwenza inkohliso.
Ke uzifumana njani ezinye iiNgxelo?
Kukho umahluko phakathi ukucela uphononongo nokubabuza. Ndabelana ngebali kwiminyaka embalwa edlulileyo nge Ukucela uphando kwi-GM oko kwakubi kakhulu. Ngokusisiseko, ukuba ndiphendule nantoni na engaphantsi kokugqibeleleyo, intloko yomntu yayiza kunqunyulwa. Kukucela oko. Kwaye ukuxelela umthengi wakho ukuba unomvuzo wokujonga kwakhona akufani nokucela ukuphononongwa! Sukwenza.
Xa omnye wabaxumi bethu esibhalela ngombulelo, ii-tweets izithupha ezikwi-intanethi, okanye usixelela ngokwethu indlela abasixabisa ngayo, siyabulela kwaye sibuze ukuba bangayibhala na ... nokuba kungqinwa ngumthengi okanye uphononongo lwe-Intanethi. Qaphela umyalelo? Basixelele kuqala, emva koko sayicela. Khange siyicenge ngaphandle kwegalelo labo. Khange sithembise nantoni na ngokubuyisela, Ngaba singalandelela nesipho njengombulelo? Ewe kunjalo, kodwa kwakungalindelwanga kwaye kungathembiswanga.
Ndingacebisa ukuba upapashe iphepha lakho kwindawo nganye yokujonga indawo kwindawo yakho. Ayiyo ukucela ukuvumela amathemba kunye nabathengi bazi ukuba bangakufumana phi ... kwaye umthengi owonwabileyo uya kubaleka kwiphepha lakho le-Facebook aze akunike uphononongo. Yenze kube lula ukuba abathengi bakho bayifumane, ibandakanye kunxibelelwano lwangaphakathi kunye nabathengi bakho, kwaye wabelane ngohlolo lwakho olukhulu xa zingenisiwe.
Umgangatho weqonga ngalinye lokujonga ubukhulu becala luxhomekeke kumgangatho wovavanyo abanalo apho. Ngaphandle kwemigaqo-nkqubo engqongqo, uninzi lwezi nkonzo zikwabandakanya ii-algorithms zokukhula kuphononongo olungelulo. IAmazon inene kakhulu ngomgaqo-nkqubo wayo kwaye ngoku iyasebenza Ukumangalela amawaka abantu abathengisa uphononongo. Nazi ezinye zeendawo zokujonga kwakhona eziqhelekileyo kunye nemigaqo-nkqubo yazo:
Umgaqo-nkqubo wokuHlolwa kweAmazon
IAmazon ayicimi amagama kwaye ayifuni abahlobo, usapho, okanye amalungu enkampani ukuba enze uphononongo. Kananjalo abafuni ukuba ubahlawulele, ewe.
Ukuphononongwa ngokuPhakanyiswayo -Ukuze kugcinwe ukuthembakala koPhononongo loMthengi, asivumeli amagcisa, ababhali, abaphuhlisi, abavelisi, abapapashi, abathengisi okanye abathengisi ukuba babhale uPhononongo loMthengi kwiimveliso zabo okanye iinkonzo, ukuthumela ukubuyekeza okungalunganga kwiimveliso ezikhuphisanayo okanye iinkonzo. , okanye uvote kuluncedo lokujonga kwakhona. Ngesizathu esinye, amalungu osapho okanye abahlobo abasenyongweni bomntu, iqela, okanye inkampani ethengisa kwiAmazon ayinakho ukubhala uPhononongo loMthengi kwezo zinto zithile.
Uphengululo oluhlawulelweyo-Asikuvumeli ukuphononongwa okanye ukuvota ngokunceda ukuphononongwa okuposwe ngenjongo yokuhlawulwa kwalo naluphi na uhlobo, kubandakanya nentlawulo (nokuba ikwimo yemali okanye izatifikethi zezipho), umxholo webhonasi, ukungena kukhuphiswano okanye i-sweepstakes, izaphulelo kwintengo yexesha elizayo, imveliso eyongezelelweyo, okanye ezinye izipho.
Umgaqo-nkqubo wokuHlola kaGoogle
Umgaqo-nkqubo wokuHlola kaGoogle Icacisa ngokucacileyo ukuba izakususa umxholo ukuba iphula umthetho wabo wokuphononongwa:
Ungqubano lomdla: Ukuphononongwa kubaluleke kakhulu xa bethembekile kwaye bengakhethi cala. Ukuba ungumnikazi okanye usebenza kwindawo ethile, nceda ungaphinde ujonge elakho ishishini okanye umqeshi. Musa ukubonelela okanye ukwamkela imali, iimveliso, okanye iinkonzo ukubhala uphononongo lweshishini okanye ukubhala uphononongo olubi malunga nomntu okhuphisana naye. Ukuba ungumnini weshishini, sukuseta izitishi zokuphonononga okanye iivenkile kwindawo yakho yeshishini ukuze ubuze uphononongo olubhalwe kwindawo yakho yeshishini.
Umgaqo-nkqubo woPhononongo lweYelp
I-Yelp iflat ngaphandle ixelela amashishini ukuba Sukufuna ukuphononongwa:
Uphengululo oluceliweyo mancinci amathuba okuba lukhuthazwe sisoftware ezenzekelayo, kwaye oko kuyakuqhuba uphambene. Kutheni le nto ezi ngxelo zingacetyiswayo? Ewe, sinelishwa lokuba sizame ukunceda abasebenzisi bethu ukuba bahlule phakathi kokuphononongwa okwenyani kunye nokukhohlisa, kwaye ngelixa sicinga ukuba senza umsebenzi olungileyo kuwo ngee-algorithms zethu ezintle zekhompyuter, inyani ebuhlungu kukuba ukuhlolwa okuceliweyo kuhlala kuwela ndawo phakathi . Khawufane ucinge, umzekelo, umnini-shishini "ocela" uphononongo ngokuncamathisela ilaptop phambi komthengi kwaye encume ngokumema ukuba abhale uphononongo ngelixa ejonge egxalabeni lakhe. Asizidingi ezi ndidi zokujonga kwakhona, ke ayifanelanga ukuba yothuse xa ingacetyiswa.
Uluhlu loMgaqo-nkqubo woHlolo luka-Angie
Uluhlu luka-Angie lucace gca kumgaqo-nkqubo wabo wokuphononongwa:
Lonke ugxeko ncomo lwakho nohlelo luya kusekelwa koku kulandelayo: (i) Amava akho okuqala nabaBoneleli beenkonzo obajongayo; okanye (ii) njengoko kubonisiwe phantsi kweCandelo le-14 (abaBoneleli ngeeNkonzo) apha ngezantsi, umntu lowo kunye namava akhe okuqala ngenkonzo yokhathalelo lwempilo okanye umboneleli wempilo apho unegunya elisemthethweni lokuxela olo lwazi kunye namava alo mntu;
Lonke uphononongo lwakho kunye nokuthelekiswa kwaBanikezeli beenkonzo oBakhethileyo kuya kuchaneka, kuyinyani kwaye kuya kugqitywa kuzo zonke iinkalo;
Awusebenzeli, awunayo nayiphi na inzala kuyo, okanye awusebenzi kwibhodi yabalawuli bayo, nawuphi na uMboneleli weNkonzo othumela kuye uphononongo kunye nokuhlelwa;
Awusebenzeli, unayo nayiphi na inzala okanye osebenza kwibhodi yabalawuli yayo nayiphi na ukhuphiswano lwaBanikezeli beenkonzo apho ungenisa uphononongo kunye nokuhlelwa;
Awunxulumananga nangayiphi na indlela (ngegazi, ngokwamkelwa, ngomtshato, okanye ngamaqabane asekhaya, ukuba uMboneleli weNkonzo ngumntu) kuye nawuphi na uMboneleli weNkonzo othumela uhlolo okanye amanqanaba kuwo;
Igama lakho kunye nolwazi lokuphononongwa luyakwenziwa lufumaneke kuBanikezeli beenkonzo apho Ujonga khona; kwaye
Uluhlu luka-Angie lungaguqula, lutshintshe okanye lukhabe uphononongo lwakho ukuba aluhambelani neendlela zika-Angie zokupapasha, ezinokuthi zitshintshe amaxesha ngamaxesha ngokokubona kukaLuhlu luka-Angie.
Umgaqo-nkqubo woPhononongo lweFacebook
Iifacebook zikhomba kubo Imigangatho yoLuntu kodwa ayifumani ngqo malunga nokucela okanye ukuphononongwa okuhlawulelweyo nangona kugxininisa uphononongo oluchanekileyo.
tags: Umgaqo-nkqubo wokuphononongwa kweAmazonuphononongo lweAmazonI-amazon ibamangalela abavavanyiUluhlu lomgaqo-nkqubo wovavanyo luka-angieUluhlu luka-angieUmgaqo-nkqubo wokuphononongwa kwe-facebookuphononongo lwe facebookImigaqo-nkqubo yokujonga kwakhona kuGoogleUmgaqo-nkqubo wokujonga ngokutsha kaGoogleUphononongo lukaGoogleuphononongo oluhlawulelweyouphononongo lomvuzoUmgaqo-nkqubo wokuphononongwa kwe-yelpuphononongo lwe-yelp
I-LookBookHQ: Ukuzibandakanya komxholo kunye neQonga lokuZenzekelayo